Izingubo zomdwebo we "figure"
Isibalo esihle asivamile kakhulu, noma kunjalo, uma ungeke ukwazi ukuziqhayisa ngezingxenye zomzimba ezinhle, akusona isizathu sokulenga impumulo yakho. Ezweni lethu lanamuhla kukhona inqwaba yezindlela nezindlela zokuthuthukisa ubukhulu bayo. Lezi zihlanganisa izinhlobo ezahlukene zokupunga, ukudla okunempilo, ukuvivinya umzimba njalo futhi, ngempela, izingubo ezifanele. Ngendlela, indlela yokugcina iyindlela elula, kodwa bayathanda ukungayinaki ngezizathu ezingaziwa. Futhi kuyize kakhulu! Namuhla sizoqhuba uphenyo futhi sithole ukuthi yiziphi izingubo ezilungele umdwebo ophakathi kwengubo.
I-pear-shaped figure imvame ukubizwa ngenye indlela - i-spoon, i-droplet, unxantathu noma i-trapezoid. Kulabo besifazane abanesibalo esinjalo, amahlombe kakade amancane kunethanga, futhi intamo ivame ukumbalwa. Isikhwama sibonakala ngokucacile, kodwa izintambo ziyindilinga futhi i-flaccid. Ama-Hips abe nobubanzi obukhulu, uma kuqhathaniswa nesinqe, cishe amasentimitha amabili nanhlanu. Ibhuzu lobukhulu obukhulu. Konke lokhu kufanele kucatshangelwe uma ukhetha ukugqoka izingubo esitolo.
Kubuye kwenzeke ukuthi ingxenye engaphezulu ye-trunk yabesifazane abanomfanekiso onjalo kunesikhathi esincane kunomunye ophansi. Amathambo emilenzeni aphezulu kakhulu, izingalo zincane, futhi isikhumba sincishwa kancane. Owesifazane onomlenze onjalo angaba yinoma iyiphi inhlanganisela, kungakhathaliseki ukuthi igcwele, iphakathi noma i-skinny. Ukwanda, futhi, akubalulekile, kepha abamele ukukhula okuphezulu abakwazi ukuhlangana njalo. Konke lokhu akufanele kukhishwe ekuqaphelweni kwakho lapho uthenga nokukhetha ingubo yalolu hlobo lwesibalo.
Umsebenzi oyinhloko obhekene nawe uma ukhetha ingubo efanele ukuzama ukubonakala ngokulinganisela phezulu nangaphansi kwesigcawu. Ngokuqondile, ungasho lamazwi: kufanele uqiniseke ukuthi amahlombe awabonakala engacacile kakhulu, futhi imilenze yayigxilile, ngaleyo ndlela ihlukanisa ukunqunywa emaceleni amakhulu. Ukuze wenze lokhu, kufanele uguqule ukunakwa kwengxenye engenhla yomzimba ngawo wonke amandla. Izindlela zokuhambisana kahle, isibonelo, faka into ekhanyayo phezulu.
Usizo lokukhulisa futhi ubheke ngokucacile umdwebo wesigqoko, ube "ne-neckline" esimweni somkhumbi noma ngezingubo zokuhlobisa kanye namahlombe angenalutho. Izikhwama, izikhumba esifubeni, iminsalo, izimbali ezivela kwendwangu, nazo, zizosiza ukufeza ibhalansi oyifunayo. Uma unesimo se-pear, ukhohlwa izinduku zepensela, futhi ikakhulukazi iziketi ze-mini. Kungcono ukubeka amamodeli avulekile aphumayo azoba ekahle kuwe. Ungagqoki ingubo ezofihla isikhumba sakho, lapho ungeke ukwazi ukugxila phezulu, futhi ngeke ukwazi ukufeza umphumela oyifunayo.
Umthetho wokuqala wokuthi wonke amantombazane onomuntu onjalo kufanele agcwalise indawo yendawo ye-decollete namahlombe kufanele ivuleke ngokugcwele.
Ukukhwabanisa okujulile kanye neziketi ezikhonjiwe emikhondweni egelezayo, phonsa kahle isibalo. Uma konke lokhu kuqaliswa ngokuhamba kancane kancane kwesigqoko, ukuvumelana kokuphezulu nokuphansi kuzotholakala ngombandela wemizuzwana.
Izingubo zeCorset kusihlwa zibhekwa njengendlela enhle kakhulu yamantombazane onjalo, ngoba ngokuqinisekile bafihla okungaphezu kwalokho.
Ukuhlaziya zonke izinketho ezethuliwe, kungashiwo ngokuqiniseka ukuthi izingubo zesiGreki, izitayela ze-"mermaid" kanye ne "princess" zizokwazi ukugcizelela ukuma kwesigqoko namahlombe.
Okuphezulu okukhanyayo kanye nomnyama omnyama kungenye indlela yokulinganisa kwalesi sibalo.
Khetha ingubo enomzimba okhanyayo, okhanyekayo ongahlotshiswe ngebhande elihle ngaphansi kwamabele, izinwele noma amatshe. Lezi zakhi zinikeza ivolumu eyengeziwe kulo mfanekiso futhi ziphazamise eziqhenqeni ezibanzi.
Phakathi nokukhethwa kwezembatho ezinjalo, ungathatha wonke amathiphu okwethulwa ngenhla. Nokho, kulokhu ubude bengubo buyashintsha - cishe emadolweni. I-style ye-cocktail engcono kakhulu i-dress-case. Isihloko sakhe sivuliwe ku-pommel, futhi lesi silwane siqina. Uma lolu khetho lungakulungi, ungakhetha isiketi sempuphu noma i-skirt-ilanga. Futhi, ungafaka phezu kwanoma yikuphi ukuhlobisa okuthandayo futhi ngesikhathi esifanayo bayodonsela ukubukeka kwabangaphandle.
Ngaphandle kwezitayela ezichazwe ngaphambili, kuzembatho zasehlobo kuzodingeka uqaphele inhlanganisela yamaphethini nemibala. Inketho engcono kakhulu yisithombe esikhulu sezingubo zokugqoka, nesinye esincane ngezansi. Ukuze uthole isibalo esenziwe nge-pear, iziketi ezidlalwayo ezinemibala ehlukene, isibonelo, ngezingqimba eziqondile noma ezine-oblique, hlanganisa umthunzi ongaphezu kweyodwa.
Ekugcineni ngingathanda ukungeza: ungakhethi izingubo zegggy noma izingubo ezizofanelana nawe. Gxila ezintanjeni ezikhanyayo ezihamba ngezinyawo, futhi ngezicubu ezinzima zikhohlwe nhlobo. Into esemqoka, khumbula, ukukhomba ngokuqondile engxenyeni engenhla yalesi sibalo, ngosizo kwanoma yiziphi izinto zokuhlobisa. Ukwengeza okukhulu kubo bonke okuzokwenziwa kuzomenza ukumomotheka nokumomotheka kwakho okungenakuphikiswa.
Ama-jackets ama-10 aphansi kakhulu enkathini ebandayo-2018
Lapho ukuthenga ijazi elihle-2017: TOP-6 brand zangaphandle kanye ezifuywayo
Indlela yokubopha isikebhe entanyeni yakho
Umbusi uNNedre S / S 2017: Izambatho eziduduzayo zokuphila
Izingubo zokugqoka zesiShayina
I-Horoscope ngoJanuwari 2018 - I-Cancer Yamantombazane - evela kuTamara Globa no-Angela Pearl
Ingulube nge-bell pepper
Izindebe ezicacile - ukuheha okuthakazelisayo-2017
Phuza kusuka ku-tarhuna
Ngenxa yalokho kungaba khona ukujuluka okuphakeme?
I-Hollywood inkanyezi u-Olivia Wilde
I-Cookies Cookies Web
Imidlalo yemidlalo enkulisa
Kungenzeka yini ukuyeka ukubhema ngokuzumayo uma ukhulelwe?
Isaladi enhle futhi enhle kakhulu "I-Mushroom Glade"
Ubuthi obusika: ukugwema, usizo lokuqala
Izimbangela zokuhlukanisa abantu